En vente actuellement 08/11/2018
Te hihena 5 kilao vetivety…ovaovao ny sakafo, izao atao!
Hafakely ity régime atolotra anao androany ity, satria tsy mahamonamonaina fa miova isan’andro ny karazan-tsakafo hanina. Tsy ela be ny hanarahana azy, kanefa azo lazaina ho betsaka ihany ny lanja very…
Fraomazy nofonosina sésame
Akora ilaina · Fraomazy lehibe 200g na 250g · Lafarinina 50g · Sésame 100g · Atody 2 · Tantely 3 sf · Persily na solila · Voasarimakirana 1 · Menaka 4 sf
Vehivavy notsindronin’ny vadiny tamin’ny antsy in’46, nefa tsy hisaraka !
Tovovavy 21 taona i Shannon Barnard, tera-tany anglisy. Notsindronin’i Michael, vadiny, tamin’ny antsy izy, rehefa nifamaly izy ireo, satria nampirafy an’i Shannon ity vadiny ity.
Manjaka ny lainga sy fitaka amin’izao fotoana, na amin’ny lafiny inona na lafiny inona. Toa tsy mba azo apetraka aman’olona intsony izany fahatokisana izany fa izay manao izany indray no latsa-nenina sy voafitaka avy eo.
Iary : Mahay mofomamy, mamorona akanjo, manaingo trano koa
Mpiangaly ny gadona « rock » no tena ahafantarana an’i Iarilaza Rakotondrasoa, na Iary. Mampiavaka azy ny feony garagara sy matanjaka, izay tsy nandiso azy teo amin’ny fisafidianana ny mozika lalaoviny. Ankoatra ny mozika anefa dia manan-talenta marobe i Iary. Araho ange e !
Manala volomaso tsy maharary… andramo ity !
Marary ny manala volomaso raha vao tsy mahafehy tsara ny teknika fanaovana azy. Ity fomba iray ity dia azo hisorohana izany fanaintainana izany. Alikaola no ampiasaina.
Ireo lamaodim-behivavy mety hanimba ny fahasalamana
Mety hanimba ny fahasalamana ny sasantsasany amin’ny lamaodim-behivavy. Indro, ho tohin’ny fandaharana Taiza Vatana, tao amin’ny Top Radio omaly, ireo karazana lamaody tokony hotandremana.